Na-asachapụ ihe mkpuchi ikuku iji zere isi ísì ọjọọ | Bezzia
Maria onyekwere | 21/06/2022 12:00 | Home
Ị gbanyela ya ntụ oyi? Anyị enweghị obi abụọ na site na okpomọkụ nke anyị nwetara n'izu gara aga, ọtụtụ n'ime unu ga-amalite ya. Ma eleghị anya, mgbe ị na-enweghị ọrụ ruo ọtụtụ ọnwa, ị chọpụtala ụfọdụ isi ísì. Echegbula onwe gị, hichaa ihe mkpuchi ikuku nsogbu ahụ ga-apụkwa.
Nhicha ikuku oyi tupu ịmaliteghachi ya na mmiri na-enye aka ọ bụghị naanị zere isi na-esi isi nke nwere ike imepụta unyi n'akụkụ ya ọ bụla. Ma, na mgbakwunye, ọ ga-eme ka ike ike ya dịkwuo mma. Chọpụta aghụghọ niile iji jiri anyị sachaa ya.
akwakọba unyi na nzacha, mgbanwe, fan ma ọ bụ drains nwere ike ime ka isi ísì na-adịghị mma pụta mgbe agbanyere ngwa ahụ. Nhicha bụ isi ihe na-akwụsị nke a na ime ka ikuku a chụpụrụ dị ọcha na enweghị nje. Gbanyụọ ngwaọrụ, soro nzọụkwụ ọzọ site nzọụkwụ na ị ga-enwe ya dị ka nke ọma dị ka ọhụrụ na-erughị 30 nkeji.
1 Nzọụkwụ site nzọụkwụ maka ihicha
1.1 hichaa ihe nzacha
1.2 hichaa igbapu
1.3 Hichaa mpụta nke otu ahụ
2 Kedu mgbe a ga-ehicha ya?
Nzọụkwụ site nzọụkwụ maka ihicha
hichaa ihe nzacha
Ọrụ nke ndị a bụ nzacha ikuku na igbochi nje bacteria na microorganisms ndị ọzọ na-amụba na imebi ọrụ nke akụrụngwa. Ihe nzacha ruru unyi na-ebelata arụmọrụ nke ngwa ahụ ma bụrụ ihe mbụ kpatara ikuku a chụpụrụ na-esi ísì ọjọọ.
Ihe nzacha dị n'ime akụkụ nke nkewa ahụ, n'azụ grille. Maka nhicha ị ga-ewepụ ha. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-edozi ahụ, ọ ga-ezuru iji ihe mkpofu na-ewepụ uzuzu na ụfọdụ unyi. N'ihi na a ọzọ nke ọma mmiri ihicha, Otú ọ dị, kwesịrị kpochapu ha na mmiri ọkụ ma kpoo ha na ndò tupu i tinyeghachi ha azụ.
Igwe ntụ oyi na-achụpụ mmiri n'ihi condensation nke na-anakọta n'ime ite mmiri. Mgbe mmiri a na-adịgide adịgide - n'ihi mkpọda dị njọ n'ime eriri ahụ - ọ nwere ike ime ka ísì ọjọọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe. uto nke nje bacteria na fungi.
Ịgbasi ike site na tube nwere ike ịbụ ngwọta dị mfe, Otú ọ dị, ọ bụghị ihe a na-atụ aro maka ngwaọrụ niile. Na mgbakwunye, na nrụnye etiti, ọ na-esikarị ike ịnweta ya. ịtụgharị ya na ọnọdụ okpomọkụ maka nkeji ole na ole nwere ike ịbụ ngwọta ọzọ.
Hichaa mpụta nke otu ahụ
Ọ bụ ezie na a na-echekwa akụkụ ndị kachasị nro n'ime unit ahụ, ọ ga-adịkwa mkpa lekọta mputa nke ngwa ka ọ ghara ikpokọta uzuzu na unyi. Ma ị nwere ike ime ya n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụhaala na ngwaọrụ dị na ebe a na-enweta ya.
Ihe na-ekpochapụ agụụ na akwa dị ntakịrị ga-enyere aka mee ka akụkụ ahụ dị ọcha n'èzí. Ngwunye ọkụ, nku ikuku ikuku na mkpuchi ga-adị mma dị ka nke ọhụrụ na-enweghị mkpa iji ngwaahịa ọ bụla pụrụ iche maka nhicha.
Kedu mgbe a ga-ehicha ya?
N'ozuzu, a na-atụ aro ka ịsacha ikuku ikuku tupu ịmalite ya na mmiri na mgbe ejiri ogologo oge mee ihe n'oge okpomọkụ. Ugboro abụọ n'afọ kwa mgbe Ị ga-ezere ọtụtụ nsogbu. Na mgbakwunye, ọ dịghị ewute ihicha ngwaọrụ n'èzí ụfọdụ ọzọ mgbe anyị na-eme ụfọdụ ihicha n'ozuzu.
Ọ na-aga n'ekwughị na ka ikuku na-ekesa n'ụlọ anyị dị ọcha, nsogbu ole na ole ga-ebilite. ụtaba, anwụrụ anwụrụ ma ọ bụ kichin nwere ike ime ka ọnọdụ ahụ ka njọ ma chọọ ihicha mgbe niile na nke miri emi.
Anyị enyela gị igodo ka ị nwee ike ihicha ikuku ikuku n'ụlọ gị mana na-echeta mgbe niile ịgụ ya ntuziaka ntuziaka onye nrụpụta tupu ịmalite ya iji zere nsogbu. Otu ọ bụla nwere ihe pụrụ iche.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla, anyị na-adụ ọdụ ka ị kpọọ ọkachamara ma ọ bụ kpọtụrụ ọrụ nlekọta nrụnye. Nkewa bụ igwe siri ike nke chọrọ ọrụ tozuru oke iji nwee ike dozie ụfọdụ nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Hichaa ihe mkpuchi ikuku ka ịzere isi ísì ọjọọ